Ku dhaqso xeeladahan Google Chrome taleefankaaga Android | Androidsis
Ku dhaqso xeeladahan Google Chrome taleefankaaga Android
DaniPlay | | Codsiyada Android, Khiyaamada Android
Google Chrome ayaa ku sii xoogaysanaya barxadda Android waqti ka dib taas oo ay ugu wacan tahay kala duwanaanta ay bixiso marka loo eego daalacayaasha kale. Is-habeyn weyn ayaa kaa dhigeysa inaad ka sii horreyso kuwa kale, nabadgelyadu waa mid kale oo ka mid ah awoodaha waxaadna xitaa ka heli kartaa wax badan oo aad uga fikirto.
Waxaa jira xeelado dhowr ah oo loogu rogo wax ka badan mid ka mid ah daalacashada badan ee la heli karo, maadaama dadka qaar ay isticmaalaan waxyaabo kale oo la mid ah sida Firefox ama Opera. Waad ku mahadsan tahay afartan khiyaanooyinka Google Chrome ee ku saabsan Android waxaad ku hagaajin doontaa arjiga heer kale.
1 Jooji soo degsashada otomaatiga ah
2 Habka aasaasiga ah si loo keydiyo batteriga, xogta loona hagaajiyo waxqabadka Chrome
3 Xullo meesha feylasha lagala soo baxo Chrome
4 Ka jooji xayeysiimaha dhibsada
Jooji soo degsashada otomaatiga ah
Doorashadan badiyaa waa la joojiyaa markii hore, inkasta oo mararka qaarkood mararka qaarkood hal shay ama mid kale ay ku hawlgasho goobaha biraawsarka. Joojinta soo degsashada otomaatigga ah ayaa naga badbaadin doonta waxyaabaha la soo dejisto ogolaanshahayaga la'aan.
Si aad u joojiso soo degsashada otomaatiga ah u gudub saddexda dhibic ee taagan, Dejinta oo hadda guji Dejinta Websaydhka. Raadi "Soo degsashada otomaatiga ah" oo ka demi "weydiiso kahor", tani waxay naga badbaadin doontaa qaar ka mid ah soo degsashada xun ama goobaha aan aaminka ahayn.
Habka aasaasiga ah si loo keydiyo batteriga, xogta loona hagaajiyo waxqabadka Chrome
Waa mid ka mid ah qaabeynta aan la dareemin maadaama ay qarsoon tahay, habka aasaasiga ah waa mid ka mid ah waxyaabaha aad isku dayi karto waana hubaal inaad had iyo jeer ka dhigto mid firfircoon. Waxay yareysaa isticmaalka xogta, batteriga iyo wax kasta oo ku daraya waxqabadka wanaagsan ee biraawsarka.
Si aad u hesho xulashadan dib ugu noqo saddexda dhibic ee tooska ah ee barnaamijka Google Chrome, Dejinta iyo "Habka aasaasiga ah", dhaqaajiso isla si tan loo soo galo. Habka aasaasiga ah wuxuu ka dhigayaa wax walba inay dhaqso u dhaqaajiyaan adigoo isku dhejinaya sawirrada, maaddaama bogagga qaarkood ay soo rogaan sawirro culus.
Xullo meesha feylasha lagala soo baxo Chrome
Ka soo degso faylal badan oo ku jira Google Chrome waxaa ugu wanaagsan in la doorto goob loo socdo si loo abaabulo sawirro, dukumiintiyo, fiidiyowyo iyo cajalado ku jira galka taleefankaaga. Xaaladdan oo kale, waxaa ugu wanaagsan in had iyo jeer wax walba gacanta lagu hayo taasna waxay dhacdaa iyadoo la qaabeynayo halka laga soo dejinayo biraawsarka.
Si aad u soo dejiso degel kale u tag saddexda qodob ee taagan, raadi Deji oo hadda raadi tabta Soo degsashada. Sii xidid cusub si looga soo dejiyo goobta aad dooratay, ama waxay ku weydiin doontaa barta mid kasta oo ka mid ah soo degsashada.
Ka jooji xayeysiimaha dhibsada
Xayeysiinta cayda ah ayaa badanaa dhibsada boggaga internetka qaarkoodSidaa darteed, waxaa ugu wanaagsan in laga hortago haddii ay badanaa furaan popup ama daaqad kale oo biraawsarka ku jirta. Waxaa ugu wanaagsan xaalado badan in laga takhaluso xayeysiiska xad-gudubka ah, maaddaama bogagga ay jiraan mahadsanid xayeysiis.
Si loo xakameeyo iyaga u gudub saddexda qodob ee taagan, Tag setinka, hada kuqoran Website-ka waxay tagtaa Xayeysiiska. Markaad gudaha gasho, dhaqaajiso ikhtiyaarka ugu dambeeya si aad u joojiso xayeysiiska shaashadda buuxa iyo kuwa Google Chrome ku abuuro daqiiqado kasta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Ku dhaqso xeeladahan Google Chrome taleefankaaga Android
Sida loo qaado shaashadda Samsung Galaxy Watch
Tani waa sida darajooyinku ugu sii jiraan PUBG Mobile iyadoo dib loogu bilaabayo xilli ciyaareed kasta